Go’aanka RW Rooble oo si weyn loo soo dhaweeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Go’aanka RW Rooble oo si weyn loo soo dhaweeyay
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhamaan waxgaradka Soomaaliyeed, ayaa si isku mid ah u taageeray go’aanka uu Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu xilkii kaga xayuubiyay Agaasimihii Shaqaalaha Hay’adda NISA Cabdullaahi Aadan Kullane (Jiis) iyo taliyihii Nabad Sugidda ee groonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh Cali.
Xildhibaan Mahad Salaad: Waxaan ugu hambalyeynayaa Ra’iisul Wasaare Rooble xilka qaadista uu ku sameeyay Madaxa Shaqaalaha Nabad Sugidda Kulane Jiis iyo Taliyaha Nabad Sugidda Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde Cabdi Wahaab Sheekh Cali. Tani waxay bilow u tahay tilaabooyin kale oo lagu taabogelinayo dowldnimada iyo in sharcigu taliyo. Waxaanan rajaynayaa digniinta kama dambeysta ah ee Ra’iisul Wasaare Rooble galabta siiyay Fahad Yaasiin in ay tusaale fiican u noqon doonto inshaa’allah”. Ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salad.
Guddoomiye Maxamec Cabdullahi Tuulax: RW Maxamed Xuseen Rooble waxaan ugu hambalyaynayaa talaabada uu maanta ka qaaday ninka ay umadda Soomaaliyeed ku wareersaneed xilka uu ka hayyo Nabadsugidda iyo awoodda dheeriga ee uu ku tagrifalayay muddo dheer. Mudane R/waaaare waxaan kugu garab taagannahay ilaalinta xuquuqda muwaadinka haduu ahaado mid mucaarad ah iyo mid muxaafid ah xiligan oo lagu jiro doorasho loona baahan yahay dadku si siman inay u wada tartamaan. Qofkasta oo geeddi socodka doorashada qalqalgelinaya waa mid aan ka simannahay inaan meel uga soo wada jeesan”. Ayuu yiri Guddoomiye ku xigeynkii hore ee gobolka Banaadir.
Madaxweyne Cadikariim Xuseen Guuleed: “Waxaan soo dhaweynayaa tilaabada sharciga ah ee uu Raisu wasaaruhu ka qaaday falkii sharci darada ahaa ee lagula kacay qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed, kuwaas oo looga horjoogsanayey xoriyadda dhaqdhaqaaqa muwaadniinta iyo safaradooda. Maamulka Farmaajo waxuu muddo dheer si bareer ah ugu tumanayey dastuurka iyo shuruucda dalka. Asagoo si isdaba joog ah meel ka dhac ugu sameynayay xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Galmudug Guuleed.
Hoggaamiye CC Warsame: “Waa ku mahadsanyahay RW Rooble tillaabada uu ugu hiilliyay sarreynta sharciga. Sharciga oo lagu tuntaa waxey macna tirtaa dowladnimada. Agaasimahii hay’adda socdaalka, maareeyihii iyo taliyihii garoonka waxaa ka awood badnaa wiil ka tirsan hay’adda Nabadsugidda, Labo kaar oo jaale ah ayaa maanta loo taagay. Waa dhici kartaa in uu edboonaado, waxayse u badantahay in isaga iyo Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ay dagaal rogaal celin ah soo qaadaan. RW Rooble in aad sharciga ku adkaysato ayaa lagaa rabaa, sababtoo ah in badan ayaad u sabartay takrifalka Farmaajo iyo Fahad”. Ayuu isna yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud: “Mas’uuliyadda qabashada doorasho nabdoon, hab-raaceeda & natiijadeedaba lagu wada qanacsan yahay waxay u baahantahay go’aanno adag, sharciga ku saleysan oo aan soo daahin. Ra’iisul Wasaare Rooble oo mas’uuliyaddaas culus qaaday waa in aan ku taageernaa, kuna garab istaagnaa”. Ayuu yiri MW Xasan.